Qalabka Calaamadinta Shabakada Wanaagsan ee Lagu Calaamadeeyay
foom ah oo ku habboon xogta ama kaydinta kombiyuutarka. Webka xoqitaanku wuxuu ku lugleeyaa feylka xogta webka, goosashada webka ama sawir-qaadista xogta bogagga. Wixii khafiifinta webka waxtar leh, waa lagama maarmaan in la doorto qalab sawir leh oo ku habboon bogga.
Qalabka waraaqaha shabakadda ee isdhexgalka iyo soo saarida macluumaadka bogga sida userka caadiga ah marka uu isticmaalo bareegga webka sida Google Chrome. Ka sokow, qalabkaan waxay ururiyaan xogta laga soo qaato websiteka oo ku kaydi faylalka gudaha - transportversicherung umzug privat. Waxaa jira qalab badan oo bog furan, taas oo kaa caawin karta inaad ku keydsato macluumaadka boggaga keydka macluumaadka. Maqaalkan SEO, waxaan ku qeexnay qaar ka mid ah qalabyada software-ka ugu fiican ee laga helo suuqa:
Maraq qurxoon. Qalabkani wuxuu leeyahay Maktabad Python, oo laga heli karo dhammaan faylasha HTML iyo XML. Isticmaalayaasha isticmaala nidaamyada Linux sida Ubuntu ama Debian waxay isticmaali karaan barnaamijkan shabakada adeega. Qalabka quruxda quruxda badan ayaa sidoo kale kaa caawin kara inaad ku kaydiso macluumaadka bogga meel fog.
mport.io. import.io waa qalab bilaash ah kaas oo u ogolaanaya dadka isticmaala inay xogta ka soo ururiyaan ayna u habeeyaan dataset. Qalabkan online-ka ah wuxuu leeyahay interface udiyaar ah oo udub dhexaad ah oo labadaba interactive iyo user-friendly. Soo saaridda xogta waligeed ma noqon mid aad u fudud!
Mogenda.. Mogenda, waxaad awoodi kartaa inaad qabato adeega adeegga shabakada adigoo isticmaalaya jilitaan iyo darajo. Dhibaatadani iyo barnaamijka guji waxay u sahlaysaa dadka isticmaala inay ka soo baxaan bogaga internetka ee aduunka.
Hub Hub Parse hub waa qalab wax lagu sawiro bogga oo si sahlan loo adeegsado. Isticmaalayaashu waxay ku raaxaystaan ​​UI toos ah oo leh sifooyin badan. Tusaale ahaan, iyada oo la adeegsanayo Hub Hub, waxaa suurtagal ah in la abuuro API-yo laga helo bogagga aan soo bandhigi karin. Waxaa intaa dheer, dadka isticmaala wali waxay awoodi karaan inay ka soo baxaan boggaga internetka oo ay ku kaydiyaan wicitaanada deegaanka.
maarshilaad. Octoparse waa codsi bilaash ah oo Windows loogu talagalay ururinta macluumaadka bogga. Qeybtan macaamiisha ah ee bogga macmiilka ayaa soo ururiya xogta website-ka ah oo aan u habeynin qaab qaabaysan iyada oo aan la codsan. Sidaa darteed, xitaa dadka isticmaala aqoonta barnaamijka eber-ka waxay isticmaali karaan qalabkan si ay u sameeyaan boggooda internetka sida ay doonayaan.
CrawlMonster. CrawlMonster waa software kaas oo kaliya ma hagaajin karo shabakada bogga laakiin sidoo kale wuxuu hubiyaa in dadka isticmaala ay ka faa'iidaystaan ​​sifooyinka Search Engine Optimization. Tusaale ahaan, dadka isticmaala waxay falanqeyn karaan dhibco macluumaad oo kala duwan oo loogu talagalay bogagga internetka.
Xiriir. Xiriirinta waa qalab sawir qaade cusub oo website ah oo ka shaqeeya qaab habboon. Tusaale ahaan, dadka isticmaala waxay codsan karaan la-talin iyagoo siinaya cinwaanka website-ka ay u baahan yihiin inay xoqaan. Intaa waxaa dheer, Connotate waxay u saamaxdaa dadka isticmaala inay isticmaalaan oo ay xoqaan macluumaadka bogga.
Guutada Guud. Isticmaalida qalabkani, waxaa suurtagal ah in la abuuro xogo badan oo loogu talagalay bogagga shabakadda. Guudmarka Guud wuxuu dadka isticmaala ku kaydiyaa macluumaadka bogga shabakada xogta ama xitaa kaydka maxaliga ah. Sidoo kale, Raadinta guud waxay u saamaxdaa dadka isticmaala inay ururiyaan xog qaas ah iyo sidoo kale macluumaadka macaamiisha bogag kala duwan.